Dabadhilif Axmed Madoobe, Seeraar, Xidig iyo Sheekh Daahir oo heshiis ku saxiixday Nairobi | Xaysimo
Home War Dabadhilif Axmed Madoobe, Seeraar, Xidig iyo Sheekh Daahir oo heshiis ku saxiixday...
Dabadhilif Axmed Madoobe, Seeraar, Xidig iyo Sheekh Daahir oo heshiis ku saxiixday Nairobi
Madaxweynihii horeee ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo xubnaha is-beddel doonka Jubaland, ee qaarkood sheeganayey madaxweynaha Jubaland, ayaa maanta heshiis ramsi ah ku kala saxiixday magaalada Nairobi.
Xubnaha oo wada-hadallo ku lahaa magaalada Nairobi muddo toddobaadyo ah, ayaa qodobada ay Kenya ku heshiisiisay waxaa ka mid ah in golaha is-baddel doonka Jubbaland, ay si buuxda u taageereen doorashadii Jubbaland ka dhacday bishii August 2019 ee Madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed IsIaam.
Waxaa sidoo kale ka mid ah qodobada heshiiska, in muddo xileedka Madaxweynaha Jubbaland ahaado sida ku cad qodobka 70-aad ee dastuurka Jubaland, oo qeexaya in Madaxweynuhu 2 mar oo kaliya uu u tartami karo kursiga, taasi oo macnaheedu yahay in Axmed Madoobe aanu mar kale isa soo sharixi karin, haddii aan wax laga beddeli dastuurka.
Dhinacyada heshiiska galay ayaa sidoo kale ugu baaqay dowlada federaalka ee Soomaaliya inay soo afjarto khilaafka mudada soo jiitamayey ee kola dhaxeeya Dowlad Goboleedka Jubaland, ayada oo Jubbaland ay sheegtay inay diyaar u tahay xallinta khilaaf kasta si waafaqsan Dastuurka Dowladda federaalka iyo kan Jubaland.
Hoos ka aqriso qodobada heshiiska oo dhameystiran